आइएसलाई परास्त गरेरै छाड्छौं: राष्ट्रपति घानी
Published: January 25, 2016 12:00 PM
काठमाडौं, माघ ११ । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले इस्लामिक आतंकवादी समूह आइएसलाई परास्त गरेरै छोड्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति घानीले विश्वभर आतंकवादी हमला गर्दै आएको आइएस विश्व सामू झुक्न बाध्य हुने बताए । अफगानिस्तानमा तालिवान लडाकु र अफगान सैनिकका साथै आइएसका कार्यकर्ताबीच हालै अफगानिस्तानमा भएको भिडन्तपछि...
फ्रांन्सका राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा,महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने तयारी
Published: January 25, 2016 11:31 AM
काठमाडौं, माघ ११ । फ्रांन्सका राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलान्द भारत भ्रमणमा पुगेका छन् । भारतको गणतन्त्र दिवसको विशेष अतिथिका रुपमा भारत पुगेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति ओलान्द र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच परमाणु भट्टी र लडाकु बिमान बारेमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुई एजेन्डाका विषयमा भारत र फ्रान्सबीच...
Published: January 25, 2016 10:14 AM
सिडनी, माघ ११ । बेलायतकी महारानीलाई ‘राष्ट्र प्रमुख’ मान्दै आएको अस्ट्रेलियाले गणतन्त्रतर्फ पाइला बढाउन थालेको छ । अस्ट्रेलियाका सबैजसो प्रान्तले मुलुकलाई गणराज्य घोषणा गर्ने दिशामा अग्रसरता देखाएका छन् । वेस्टर्न अस्ट्रेलिया एकमात्र त्यस्तो प्रान्त हो जसले अहिले नै गणतन्त्रमा जान नहुने धारणा राखेको...
न्यूयोर्कमा हिमआँधी रोकियो, गुड्न थाले सवारीसाधन
Published: January 25, 2016 08:42 AM
काठमाडौं, माघ ११ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हिमआँधी रोकिएको छ । हिमआँधी रोकिएसँगै सवारीसाधन सन्चालनमा लगाइएको रोक हटाइएको छ । अझै पनि वासिङ्टन डिसीमा मेट्रो सेवा बन्द रहने छ भने हवाई यात्रा पनि केही समयसम्म प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । हिमआँधीका कारण लगभग सात हजार उडान रद्द भएका थिए । हिमआँधीका...
पेरिस आक्रमणमा संलग्नको भिडियो सार्वजनिक
Published: January 25, 2016 12:02 PM
काठमाडौं, माघ ११ । आतंककारी संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसले फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको आतंककारी आक्रमणमा संलग्नको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । आतंककारी गतिविधिको निगरानी गर्ने एक समूहले आइएसले गत नोभेम्बरमा गरेको पेरिस आक्रमणमा संलग्न आक्रमणकारी भिडियो अनलाइनमा पोस्ट गरेको जनाएको छ । ...
Published: January 24, 2016 20:32 PM
वासिंटन, माघ १० । अमेरिकाको अलास्का राज्यको दक्षिणी तटमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । युरोपेली भूमध्य भूकम्प केन्द्रले ७.१ म्याग्निच्यूटको भूकम्प गएको जनाएको छ । भूकम्पले आसपासका क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान १ः३० मा भूकम्प गएको हो । समुद्री सतहबाट १२३ किलोमिटर गहिराईमा भूकम्पको...
थाइल्याण्डको समुद्री किनारमा विमानको टुक्रा भेटियो, बेपत्ता मलेसियन विमानकै टुक्रा हुन सक्ने आशंका
Published: January 24, 2016 18:45 PM
बैंकक, माघ १० । दक्षिणी थाइल्याण्डको समुद्री किनारमा एउटा विमानको टुक्रा फेला परेको छ । स्थानीयवासीले फेला पारेको सो टुक्रा झण्डै दुई वर्ष अघि हराएको मलेसियन एअरलाइन्सको ‘एमएच ३७०’ विमानकै हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । मार्च २०१४ मा दुई सय ३९ जना लिएर बेइजिङका लागि उडेको सो विमान बेपत्ता भएको थियो । ...
अमेरिकामा हिमपातले मर्नेको सख्या १९ पुग्यो, ४८ इन्चसम्म हिउँ पर्नसक्ने
Published: January 24, 2016 09:01 AM
अमेरिका, माघ १० । अमेरिकामा दुई दिनदेखि सुरु भएको हिमपात र आँधीहुरीका कारण अमेरिकामा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रवारदेखि लगातार परेको हिमपात र आँधीहुरीका कारण ९ जना र बाँकी १० जनाको सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको समाचार फक्सले जनाएको छ । हिमपातका कारण अमेरिकाको पूर्वी भूभागको जनजिवन प्रभावित भएको छ । ...
इरान–चीनबीच आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सहमति
Published: January 23, 2016 18:38 PM
काठमाडौं, माघ ९ । इरान र चीनले आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने भएका छन् ।तेहरान भ्रमणमा क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीबीच भएको वार्तापछि सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सहमति भएको हो ।६ खर्ब डलरको व्यापार विस्तारलगायतका विषयका सम्बन्धमा दुई नेताले १७ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।...
इजिएन सागरमा दुईवटा डुंगा डुब्यो, ४२ जनाको मृत्यु
Published: January 23, 2016 08:59 AM
काठमाडौं, माघ ९ । ग्रिसको इजिएन सागरमा आप्रवासी चढेका दुई डुंगा डुब्दा ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । ग्रिसको कालोलिम्नोस टापु नजिक ३४ जना आप्रवासी चढेको डुंगा डुबेको हो । जसमा ११ जना बालबालिका रहेको बताइएको छ । यस्तै ८ जना चढेको अर्को डुंगा फार्माकोनिसी टापु नजिक डुब्दा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । ...
Published: January 23, 2016 08:52 AM
अमेरिका, माघ ९ । अमेरिकामा हिमपातका कारण केहि राज्यहरुमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ हिमपात एक सय बर्षयताको बढी हुने बताइएको छ । हिमपातकै कारण शुक्रबार र शनिवारका विभिन्न राज्यहरुमा ६ हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्टिय उडानहरु रद्द भएको जनाईएको । स्टेट अफ वासिडटन डिसीले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै २ फिट बाक्लो...
क्यानडाको एक विद्यालयमा गोली प्रहार गरी चारजनाको हत्या
Published: January 23, 2016 08:49 AM
काठमाडौं, माघ ९ । क्यानडाको एक विद्यालयमा जथाभावी गोली चलाएर कम्तिमा चार जनाको हत्या गरिएको छ । सक्केटचेवन राज्यको ला लोश कम्युनिटी स्कूलमा जथाभावी गोली प्रहार गरेर चार जना विद्यार्थीको हत्या गरिएको हो । घटनामा दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले घटनाप्रति दुख ब्यक्त गर्दै संदीग्ध बन्दुकधारीलाई...
Published: January 22, 2016 11:57 AM
पेरिस, माघ ८ । फ्रान्समा इस्लामिक स्टेट (आइएस) बिरुद्धको कारबाही समाप्त नभएसम्म सकंटकाल जारी रहने भएको छ । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री मानुएल भल्सले आतंकवादी समूह आइएसका कारण देश असुरक्षित रहेको भन्दै संकटकाल जारी रहने बताएका हुन् । फ्रान्सको पेरिसमा गत नोभेम्बरमा आइएसले गरेको आतंकवादी...
जर्मनी बन्यो विश्वकै उत्कृष्ट मुलुक, विधागत रुपमा अग्रस्थानमा रहेका मुलुक यी हुन्
Published: January 22, 2016 09:48 AM
लन्डन, माघ ८ । विश्वकै उत्कृष्ट देश जर्मनी बनेको छ । स्वीटजरल्याण्डको दाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक शिखर सम्मेलनमा जारी गरिएको तथ्यांक अनुसार जर्मनी विश्वकै उत्कृष्ट मुलुक भएको हो । विभिन्न मापदण्डका आधारमा गरिएको मूल्यांकनबाट जर्मनी उत्कृष्ट मुलुक भएको जनाइएको छ । बलियो अर्थव्यवस्था, विश्वलाई नै प्रभावित...
१३० वर्षपछि जोडियो हिन्दु धर्मावलम्बीको पुजनीय मूर्तिको टाउको
Published: January 22, 2016 08:06 AM
कम्बोयडिया, माघ ८ । कम्बोडियाको फोम दा मन्दिरमा रहेको हिन्दुहरुको पुजनीय भगवानको एक मुर्तिको टाउको १३० वर्षपछि जोडिएको छ । सो मूर्तिको टाउको फ्रान्सेली शोधकर्ताहरुले लगेका थिए । १३० वर्षपछि मूर्तिको टाउको फ्रान्स सरकारले फिर्ता दिएपछि हालै सो मूर्तिले पुनः पूर्णाकार पाएको हो । कम्बोडियाको...